धरानको वीपीमा उपचार गर्न ल्याएका बालकलाई डाक्टरले निन्द्राको गोलि दिएपछी संसार छाडे – ताजा समाचार
धरान / वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा चिकित्सकहरुको लापरवाहीले ८ वर्षिय बालकको ज्यान गएको छ । खोटाङ बाट उपचारका लागि ल्याइएको ८ वर्षिय बालकको शुक्रवार चिकित्सकहरुको लापरवाहीले मृ’त्यु भएको बालकको अभिभावले आरोप लगाएका छन् । खोटाङ जिल्ला जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका ५ का जीवन राईको छोरा जमिर राई लाई एमर्जेन्सीमा ल्याइएकोमा एमर्जेन्सीमा बेड खाली छैन् भनि बाहिरै कुर्सीमा कुराउन लगाएको अवस्थामा मृ’त्यु भएको हो ।
बालक जमिर लाई उपचारका लागि दिउँसो साँढे ४ बजे वीपी ल्याइपुर्‍याएको थियो । विरामी लाई एमर्जेन्सीमा नराखी बाहिर बाहिरै पुर्जी काट्न, एक्सेर गर्न र एउटा ट्याबलेट किन्न लगाइएको थियो । त्यस बेला सम्म करिब ६ बजिसकेको थियो । डाक्टरले भनेको ट्याब्लेट खाएपछि विरामीले निन्द्रा लाग्यो भन्दै बुवाको काखमा सुतेको थियो । एकछिनपछि सुतेको छोरा भुइँमा लडेपछि हतार हतार विरामी लाई एमर्जेन्सीमा लागिएको थियो । प्रत्यक्षदर्शी विरामी कुरुवाहरुका भनाई अनुसार भित्र लगेर अक्सिजनको मास्क लगाएको त्यो बेला बिरामी पुरै छटपटाई रहेको बताए । लगत्तै विरामीको मृ’त्यु भएको चिकित्सकहरुले जानकारी दिएका हुन् ।
खोटाङ जिल्ला जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका ५ का जीवन राईको छोरा जमिर राई
मृतकका बाबू जीवनका अनुसार अस्पताल सम्म आउँदा छोरो ठिक थियो ।उनैले अस्पतालको बाटो देखाएका थिए । केही छिन अघिसम्म उसको आमासंग फोनमा बोलेको र रेडबुल खान मन लागेको बताउँदै आफुलाई केही नभएको भनि आमासंग राम्रै अवस्थामा कुराकानी गरेको छोरा अचानक मृ’त्यु भएको बताउँदै उनले भने ‘डाक्टरहरु कै लापरबाहीले मेरो छोरो अकालमा म’रे’को हो ।’ उनले एमर्जेन्सीमा ल्याएको विरामी लाई बेड खाली छैन् भनियो, पछि विरामीलाई उनिहरुले नै बताएको ट्याबलेट खुवाएपछि सिकिस्त भयो त्यस बेला भने एमर्जेन्सीमा हतार हतार लगियो ।
छोरोको मुटुको धडकन अत्याधिक बढेको र यसअघि उपचार गरेको बारेमा सबै कुरा बताउँदा बताउँदै पनि डाक्टरहरुले वस्ता नगर्दा छोराको अकालमा मृ’त्यु भएको उनले आरोप लगाए । उनले भने ‘छोरा लाई एमर्जेन्सीमा लैजाँदा १२ बजि सकेको थियो, ४ बजे ल्याएका विरामी लाई १२ बजे सम्म डाक्टरहरुले हेरिदिएनन् ।’
विरामी बालक लाई एमर्जेन्सीमा उपचार गर्न अघि चिकित्सकले औषधीको ट्यबलेट खुवाउन लगाएको कुरा मृतकका बुवा जीवनले देखाएको बाँकी औषधीको खोल बाट पुष्टि भएको छ । उक्त औषधिका बारेमा एमरर्जेन्सीका चिकित्सक डा. सरोज संग बुझ्नखोज्दा खुलेर जवाफ दिन चाहिरहेका थिएनन् । शुरुमा प्रश्न गर्दा शुरुआतदेखि आफू संलग्न नरहेको उनले बताए ।
उनले विरामी लाई यसअघि कुन चिकित्सकले हेरेको हो उनको नाम माग गर्दा पनि दिन चाहेनन् । चिकित्सक सिफ्ट परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित चिकित्सकले हेरेको बिरामी बारे सबै कुरा ब्रिफिङ गरेर मात्र नयाँ सिफ्टका चिकित्सकले जिम्मा लिने काम हुन्छ । डा. सरोजले त्यो खुलाउन चाहेनन् ।
तर बिस्तारै बिहानदेखी नै त्यहाँ आफू रहेको स्वीकार गरे । उनका अनुसार बिरामीको मुटु सुन्निएको अवस्था भएको बताउँदै त्यस्ला मेडिकलको भाषामा कार्डियोमेघाली भनिने बताए । मुटुको धड्कन तेज भएकोले त्यसलाई रिदेमा भएको भनिने जानकारी पनि दिए ।
उनी संग ‘तपाईले दिएको ट्याब्लेटले असरको कारण मृ’त्यु भएको हो की ?’ भनेर प्रश्न गर्दा उनले गैरजिम्मेवार शैलीमा भने ‘केही भन्न सकिदै ।’ गाउँमा जडिबुटी र धामी लगाएकोले त्यसले पनि असर हुनसक्छ भनेर उनि पन्छिन खोजे । डां सरोजले उपचारको क्रममा मुटुको समस्या भएको विषयमा बिरामीको बुबाले जानकारी नदिएको दाबी गरे । तर बुबा जीवन राईले भने शुरुमै मुटुको विरामी भएको जानकारी दिदैं एमरजेन्सीमा उपचारका लागि अनुरोध गरेको बताए ।
बालकको मृ’त्यु भएको थाहापाएर पत्रकार एमर्जेन्सीमा पुग्दा मृ’त्यु भैसकेका जमिरको यसअघि अन्य ठाउँमा जाँच गराएको कागजपत्र डा.सरोजले हेर्दै थिए । डाक्टरको उक्त व्यवहारले मृ’तक बालकको मुटु सम्बन्धि अवस्था नबुझी उनलाई एमरजेन्सीमा भर्ना नगरिएको र बाहिरै राखेर इण्डेरल नामक औषधि खुवाउन लगाएको बुझिएको छ । त्यसै बेला बाल इमर्जेन्सीमा रहेका अन्य बिरामीका कुरुवा प्रत्यक्षदर्शिले डाक्टरहरुले बालबालिकाको उपचामार एकदमै हेलचक्राई गर्न गरेको बताए ।
वीपीका चिकित्सकहरुको यस्तो लापरवाहीका कारण दुर्गमस्थल बाट उपचार गरेर निको पारी घर फिर्ने विश्वासका साथ वीपी आएको एक पिताले एमरजेन्सी बाहिरै उपचारै नपाई बालक छोरो गुमाउनु प¥यो । पाँच दिन अघि ८ बर्षको छोरा जमिर राईको मुटुको धडकन तेज भएको उनको आमाले थाहा भएपछि नजिकका क्लिनिकमा उपचार गराएका थिए । थप उपचारका लागि भनेर बुबा जीवनले छोरो लाई वीपी ल्याएका थिए । बाबु लाई समेत बाटो भुलेकोमा छोराले नै देखाएर ल्याएको छोरा अस्पताल पुगेको ६ घण्टापछि मृ’त्युको मुखमा पुगेको हो ।